Dubai "Onye Ngbanwe Ndụ" | Ọrụ - Ọrụ - Njem Akụkọ Ezigbo sitere na otu n'ime ndị na-eso ụzọ anyị
Dubai "Mgbanwe Ndụ"
Ọ nwere otu ebe n'ụwa nke a na-akpọ “Dubai”
Nwere ike 13, 2019
Ikwel nke Switzerland
Dubai “Ndụ Onye Na-agbanwe Ndụ” - Anụrụ m akụkọ banyere Dubai “Onye na - agbanwe ndụ” site na afọ mana efegoro m n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa ma ọ gosipụtara na ọ ga-eme njọ. Eji m obi eziokwu jiri nkà m na-akọ ya na ọtụtụ ụlọ ọrụ azụmaahịa, mana ọ bụ naanị rụpụtara onwe ha uru ma gbochie ọdịnihu m.
Ọchịchị na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị kwụsịrị nrọ m maka ihe ndị mebiri emebi m ebe ndị ikwu na ndị hụrụ m n'anya furu efu. Anyị nọ n'ime ERA ebe ịhụnanya na mmekọrịta abụrụla ihe akụnụba ọ bu kwa ole na ole di ndu bu ndi tukwasiri obi ike gị na ebumnuche gị nke ndụ.
Nwanne okenye nwoke na-echekarị ka nna Ibu ọrụ dị na m na - atụgharị m dịka okwute na - atụgharị na ndụ m niile Anọ m na-echere ka ihe kụrụ m ka m banye n'ọnọdụ kwụsiri ike.
Otu ụbọchị mgbe otu ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ dakọtara m na Dubai na Agbagoro m n'ụdị ohere. Ibọchị m gara apụ ọdụ ma ahụrụ m ọrụ ndị dị n'ọdụ ụgbọ elu, teknụzụ, usoro nkwukọrịta a haziri nke ọma, achọpụtara m ozugbo n'otu oge ahụ ala a Anọ m na-eche ndụ m niile.
Dubai bụ steeti ebe Ndị ọrụ Blue-collar na-emeso dị ka mmadụ ma nyewo ikike zuru oke nke ikpe ziri ezi ma a na-emeso ha otu ọ bụla n'agbanyeghị mba. Gọọmentị Dubai ekenyela akwụkwọ nkọwapụta idobe ndenye ego mgbe niile na ebe obibi ha, nri, njem, ọgwụ na ihe ndị ọzọ niile ebe onye ọrụ na-acha anụnụ anụnụ enweghị ike iche maka ya. Ekwere m ihe olu na-acha anụnụ anụnụ ndị ọrụ Dubai bụ eze ndị ọrụ Eshia ndị ọzọ.
Dubai bu ebe nrọ!
Dubai bụ ebe dị n'ụwa a nke Chukwu ebe m chere na m dị afọ iri na ụma dị ukwuu nọrọ ná nchebe ọbụna ma ọ bụrụ na ọ na-ejegharị nanị n'okporo ámá 2 na abalị.
Chee echiche banyere ihe obula ma hu ya na Dubai, Akara site na 1 Dhm rue nde. Eziokwu kachasị mma a na-enweta ngwa ngwa m hụtụrụla na ndụ m. Enwere m ike ịkwado Dubai bụ akara ngosi nke ịzụ ahịa.
Dubai bụ naanị steeti ebe nwoke nkịtị nwere ike ime njem site na ịkwụ ụgwọ 10 Dhms naanị ileta Towerlọ elu kachasị ama ụlọ ụwa kachasị elu na nnukwu ụlọ ahịa ụwa (nnukwu ụlọ ahịa Dubai), nke na-egosi n'ụzọ doro anya na obodo a enweghị ịkpa ókè agbụrụ. Naanị ala kachasị elu na ụwa ebe ndi mmadu sitere na omenaala na asusu obula nwere ike ino ndi agbata obi gi.
Ahụwo m ma gbaa àmà Ulo oru di na nchebe zuru oke ma nwee odinihu mara mma, ma enwere ike ị nweta ihe ịga nke ọma n’ibute echiche ọhụrụ ma soro usoro Gọvanọ ahụ. nke Dubai.
Onye maara ihe si mba dị anya nwere ike inweta ọtụtụ narị azụmaahịa echiche site na usoro nke ọ bụla, Dubai bụ ebe mmụta kachasị mma site n'akụkụ nile nke ọgbọ niile.
Dabere na njem na njem bụ nchegbu, ya mere, n'echiche nke m, ọnwa abụọ agaghị ezu iji chọpụta ezigbo ịma mma nke Dubai.
Abatala m n'ime ụwa kachasị mma & rọrọ nrọ iji ruo ebe m ga-eje Dubai ma mee ka nrọ m mezuo. Ọzọkwa, Dubai nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ Cryptocurrency.
HRlọ ọrụ HR anyị ugbu a na-enye ezigbo nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ndị njem Dubai. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.